प्रतिशाेध (लघुकथा) - Lekhapadhi.com साहित्य/कला : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ११:२६ मा प्रकाशित
“अनुष्का याे तस्बिर ?” सिया हड्बडाइन् ।
“चिनिनाै र ?” “चिने झै लाग्यो तर…..” सिया अन्कनाईन् ।
“तिमी मेरो विवाहमा आएकी थियौ हैन र ?” “हाे।” “अनि! यि उनै हुन्।” तर… “फेरि अन्कनाइन ।
“तिमीलाई थाहा छ नि ! म आज साहित्यिक र व्यावसायिक रुपमा सफल हुन संघर्षरत छुँ । हाे, यसमा यहि मान्छे असली सहयात्री हाे।”
“हाे, मेरो डिभाेर्स भइसक्यो ।”
“अनि तिमी माथि ठुलो हिंसा भयो भन्ने सुनेकी थिएँ।” -“अवश्य हाे म माथि हिंसा भएको।”
“अनि यो तस्बिरलाई किन यति महत्त्व दिएर यहाँ ?”
सिया छक्क पर्दै प्रश्नसूचक दृष्टिले अनुष्कालाई नियालि रहिन्।
“मलाई आफ्नाे संसारमा बाँच्न नदिइ गलहत्याउने यो मान्छेलाई जतिजति सम्झिन्छु, उति-उति म भित्र प्रतिशाेधकाे ज्वाला दनदनी दन्किरह्यो; जसले मेरो मरिसकेको आत्मविस्वास ब्युतायो।”
हल्का मुस्कुराउँदै अनुष्का- “मलाई आफ्नाे संसारमा बाँच्न नदिइ गलहत्याउने यो मान्छेलाई जतिजति सम्झिन्छु, उति-उति म भित्र प्रतिशाेधकाे ज्वाला दनदनी दन्किरह्यो; जसले मेरो मरिसकेको आत्मविश्वास ब्युतायो।”
“सुनको पिँजडाबाट मुक्त सुगा जस्तै आफ्नाे संसारमा खुल्ला रुपमा विचरण गरी वास्तविक संसारकाे अमृतमय रसस्वादन गरी आफूलाई तन्दुरुस्ती बनाएँ।” “जति-जति यो तस्बिर देख्छु, म भित्र विद्राेहकाे भावना प्रबल बन्दै जान्छ ।
फलतः ऊ सँगकाे प्रतिशाेध स्वरूप कठाेर संघर्ष गर्दै गएँ। “मलाई जलाउन बालेको आगाेबाट राप सहेर ताप र प्रकाश ग्रहण गर्न सकेँ ।
त्यसैले मेरो प्रेरणाको यो आगाेलाई निभ्नै नदिई सुरक्षित गरेकी हुँ।”
मिसु श्रेष्ठ थपलिया
दाेलखा ( हाल काँडाघारी काठमाडौं )